Camaloow Online - News: WAR DAG DAG AH: DAGAAL KA QARXAY MAGAALADA MUQDISHO TARBUUNKA / HODON IYO...
20 June 2013 07:26:04 Random Media
· Guests Online: 562
WIIL YAR MAASHAA ALLAH
WAR DAG DAG AH: DAGAAL KA QARXAY MAGAALADA MUQDISHO TARBUUNKA / HODON IYO...
Dagaal xoogan ayaa saakay mar kale dib uga qarxay Magaalada muqisho oo usbuucii labaad ku jirta Dagaal si joogta ah uga socda waxaana uu dagaalku si xoogan uga soconayaa Qeeybo ka mid ah Koofurta Magaalada Muqdisho. Dagaalkaani oo qarxay saakay waaberigii ayaa xoogaga kasoo horjeeda dowlada KMG eey weerar ku soo qaadeen Ciidamo taabansan dowlada oo ku sugan degmada Hodan gaar ahaan Agagaarka Tarabuunka iyo Hotel Taleex.
Ciidanka halkaasi ku sugnaa oo ah ciidankii uu lahaa Wasiiru dowlihii hore ee Gaashaandhiga Shiikh Yuusuf maxamed Siyaad Indhacade ayaa iyagu ku sugan Agagaarka Tarabuunka , Hotel Taleex ,Carwadii hore iyo aagaga ku dhow dhow oo dhan.
Xoogaga Shabaab ayaa subaxnimadii hore alaseey soo weeraray sida aan ku heleeyno wararka ka imaanaya goobta dagaalka waxaasna soconaya Weerar iyo weerar celis eey bar bar socdaan Madaafiic eey tuurayaan Ciidanka Amisom oo ku sugan Madaxtooyada iyo weliba isgooyska KM4.
Warar hor dhac ayaa sheegaya in Ciidanka Taabacsan indhacade eey dib isaga riixeen kuwa shabaabka waxaana la maqlayaa risaas goos goos ah oo weli ka dhaceeysa aagii la isku farasaaray.
Weli lama hayo Qasaaraha kala gaaray dhinacyad dagaalamaya waloow uu jiro qasaare soo gaaray askartooda iyo mid soo gaaray shacabka lagu garaacay Madaafiicda iyo risaasta wiiftada ah oo aan cidna loola aaba yeeleeyn
· camaloow on 04/09/2010 ·
0 Comments · 26272 Reads
ALIF..BA...TAA BARASHADA CARUURTA ALIFKA
10,948,547 unique visits